कोशी गाउँपालिकाको बजेट ४८ करोड - Kantipath.com
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ४८ करोडको बजेट, योजना, नीति तथा कार्यक्रम सर्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले आठौं गाउँसभामा बुधबार रु ४८ करोड २ लाख ७३ हजारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चतर्फ रु २५ करोड ५० लाख ७३ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ रु २२ करोड ५२ लाख निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार ‘पर्याप्त पूर्वाधार, गाउँमै रोजगार, कृषि र पर्यटन समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकोे छ । ‘गाउँमा दिगो भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन समृद्धिको आधार’ भन्ने लक्ष्यका साथ प्रत्येक वडामा गाउँका कच्ची सडकलाई कल्भर्ट, ह्युमपाइपसहित ग्राभेल सडकमा स्तरोन्नती गरिने नीति लिएको बताउँदै उनले ‘एक वडा एक गौरव योजना’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वडामा कम्तिमा रु पाँच करोड लागतको एउटा योजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक खेल मैदान’ को अवधारणा अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका ऐलानी÷सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गरी खेल मैदान तथा पार्कका रूपमा विकास गर्ने निति लिएको छ । गाईभैँसी सुन्दरी प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिदैं गाउँपालिकाले किसानको मनोबल उच्च पार्न सहभागी कृषकलाई पुरस्कार समेत वितरण गरिने योजना ल्याएको अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ ।
सभामा वर्षभर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै गाउँपालिकाका तीन जना कर्मचारीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र गिरी, नायब सुब्बा राजकिशोर मेहता र प्राविधिक मुन्ना ठाकुरलाई पुरस्कृत गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरी र नायब सुब्बा मेहतालाई सम्मानपत्रसहित नगद रु एक लाख तथा प्राविधिक ठाकुरलाई नगद रु २५ हजार सहित पुरस्कृत गरिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व असुली गर्ने कोशी गाउँपालिका वडा नं १ लाई समेत पुरस्कृत गरिएको छ । File Photo
Previous Previous post: राष्ट्रपतिद्वारा २० मन्त्रीको पद खुस्किएको पर्सिपल्ट संवैधानिक निकायमा २० नियुक्ति
Next Next post: निषेधाज्ञा थप
जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा छ्यापछ्याप्ती, लोभमा फसे किसान !
नेपाल चेम्बर र महिला चेम्बरले तीज व्यापार मेला २०७६ आयोजना गर्ने
दशैँमा पर्यटन रुट परमिटका बसले भारतबाट यात्रु ओसार्दै !
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित गैँडा छाप सिमेन्टको मूल्य घट्यो